Ny fanambarana farany NEST dia mampiseho amintsika ny iray amin'ireo Pixel vaovao | Vaovao momba ny gadget
Ny fanambarana farany NEST dia mampiseho amintsika ny iray amin'ireo Pixel vaovao
Kely sy kely no banga amin'ny 4 Oktobra ho avy izao, ny daty hanoloran'i Google ny mpandimby ny fianakaviana Nexus, izay manomboka izao dia hatao hoe Pixel. Google dia hanangana maodely vaovao roa, iray 5-inch ary iray 5,5-inch, samy manana endrika sy famaritana mitovyafa-tsy ny haben'ny efijery. Ireo maodely ireo dia toa manamarika ny fiandohan'ny làlana vaovao izay harahin'i Google amin'ny telefaona finday, nandao ny fifanarahana teo aloha hanamboarana ny maodeliny. Google dia te-hanomboka mamolavola sy manamboatra ny fitaovany manokana nefa tsy miankina amin'ny antoko fahatelo.
Google dia nanangana doka vaovao izay ankoatry ny thermostat NEST vaovao, dia izy koa azontsika atao ny mahita, fanahy iniana (angamba) sarin'ireo modely Pixel vaovao hatolotry ny orinasa amin'ny 4 Oktobra. Ao amin'ny sary dia tsy azontsika atao ny manavaka raha ny maodely 5-inch na ilay maodely XL 5,5-inch. Ity karazana telefaona vaovao ity dia hiatrika fiakarana vidiny, hametraka ny vidin'ireny terminal ireny amin'ny 700 euro ho vidiny voalohany amin'ny maodely 32 GB.
Araka ny hitantsika tamin'ny fanambarana, ny famolavolana ny sary farany sy ny fandefasana izay efa navoakan'ny Pixel vaovao dia hohamarinina, ary izay ahitana ny tsipika mitohy miaraka amin'ny tandavan'i Nexus. Ireo modely vaovao novolavolain'i HTC, ary koa ny maodely sasany an'ny fianakaviana Nexus izay natombok'i Google teny an-tsena.
Ao anatin'ireto maodely vaovao ireto dia mbola tsy mazava ny fahitantsika ny Snapdragon 820 (izay efa an-tsena efa ho herintaona) na ilay Snapdargon 821 vaovao, ilay processeur farany navoakan'ny orinasa Qualconn. Ireo modely roa ireo dia hotantanan'ny 4 Gb RAM, hampiditra fakan-tsary 12 mpx aoriana ary fakan-tsary 8 mpx eo anoloana, samy novokarin'i Sony. Ny tena maha samy hafa ny terminal roa hitantsika io amin'ny vahaolana amin'ny efijery, vahaolana izay miovaova rehefa manova ny haben'ny mitovy ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny fanambarana farany NEST dia mampiseho amintsika ny iray amin'ireo Pixel vaovao
Microsoft dia mampihena ny masinina fanontana sonia aorian'ny olana Linux
Ao amin'ny teaser vaovao Xiaomi dia manamarina ireo fakantsary aoriana roa an'ny Mi 5S